Xogta Suuqgeyntu: Furaha u Taagan istaagga sanadka 2021 iyo wixii ka dambeeya | Martech Zone
Waqtigan xaadirka ah iyo maanta, cudurdaar looma heli karo in aan la ogeyn cidda loo suuqgeynayo alaabadaada iyo adeegyadaada, iyo waxa ay macaamiishaadu doonayaan. Markii ay soo ifbaxday keydka macluumaadka suuq geynta iyo tikniyoolajiyadda kale ee xogta kexeysa, waa la dhaafay maalmihii suuq geynta aan la beegsan, la dooran, iyo guud ahaan.
Muuqaal Taariikhi Gaaban
Kahor 1995, suuqgeynta inta badan waxaa lagu sameyn jiray boostada iyo xayeysiinta. Wixii ka dambeeyay 1995, markii uu soo ifbaxay teknolojiyadda emaylka, suuqgeynta ayaa waxyar ka sii gaar ah. Waxay ahayd imaatinka taleefannada casriga ah, gaar ahaan iPhone-ka 2007, in dadku runtii bilaabeen inay ku xirnaadaan waxyaabaha, hadda si fudud looga heli karo shaashadooda. Taleefannada casriga ah ee kale ayaa suuqa ka soo baxay wax yar ka dib. Kacaankii casriga ahaa wuxuu dadka u oggolaaday inay wataan aaladda gacanta lagu hago ee casriga ah meelkasta oo ay joogaan. Tani waxay horseedday in la doorbido xogta doorka isticmaalaha saacad kasta. Soo saarida waxyaabaha laxiriira una adeegida dadka saxda ah waxay bilaabeen inay noqdaan istiraatiijiyad suuq geyn muhiim u ah ganacsiyada, welina waa kiiska.
Imaatinka 2019 oo aan fiirineyno wixii ka baxsan, waxaan aragnaa in isticmaaleyaashu ay yihiin kuwo aad u dhaqdhaqaaqa oo leh kororka ku tiirsanaanta qalabka ay gacanta ku hayaan. Xogta suuqgeynta maanta waxaa lagu qabsan karaa marxalad kasta oo nidaamka iibsiga ah. Suuqleyda si ay u ogaadaan waxa macaamiishoodu rabaan, waxay marka hore u baahan yihiin inay ogaadaan halka ay raadinayaan! Xogtu waxay siin kartaa fikrado qiimo leh macaamiisha mustaqbalka 'dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada, dabeecadda daalacashada, iibsashada khadka tooska ah, qaababka maalgashiga, dhibcaha xanuunka, baahiyaha u baahan, iyo cabbirada kale ee muhiimka ah. Noocan xogta suuqgeyntu waxay udub dhexaad u noqon doontaa istiraatiijiyad kasta oo suuq geyn ah oo waxtar leh.
Istaraatijiyadaha Aasaasiga ah ee Xog Uruurinta Suuqgeynta
Ha u tagin indho la’aan xog ururinta! Waxaa jira tiro suuq ah oo suuq-geyn ah oo xogta suuqgeynta ah oo laga heli karo halkaas, waxaadna inta badan ubaahantahay oo keliya qeyb laxiriirta. Xog ururinta waa inay ku xirnaataa nooca ganacsigaaga iyo marxaladda ay shirkaddaadu ku taagan tahay wareegga horumarka. Tusaale ahaan, haddii aad tahay shirkad bilow ah oo bilaabaysa, markaa waxaad u baahan tahay inaad soo uruuriso xog fara badan oo kala duwan ujeedooyin cilmi baaris suuqa ah. Tan waxaa ka mid noqon kara:
Bartilmaameedka cinwaannada emaylka kooxda
Doorbidyada warbaahinta bulshada
Hababka lacag bixinta ee la doorbiday
Shirkadaha ganacsiga waxay horey u lahaan karaan xogta suuqgeynta ee kor ku xusan. Hase yeeshee, waxay si joogto ah ugu baahan yihiin inay sii wataan cusbooneysiinta qeybahan iyaga oo waliba uruurinaya data macaamiisha cusub. Waxay sidoo kale u baahan doonaan inay diirada saaraan raadinta jawaab celinta macaamiisha qiimaha leh iyo helitaanka fikradaha ku saabsan qiimaha badeecada jirta iyada oo loo marayo xogta.
Intaa waxaa sii dheer, bilowga, SMEs, iyo hay'adaha waaweyn, xafidaada diiwaanada dhammaan noocyada wada xiriirka macaamiisha waa muhiim. Tani waxay u oggolaaneysaa iyaga inay jaangooyaan istiraatiijiyad isgaarsiineed oo wax ku ool ah oo lala yeesho macaamiisha.
Lambaradu been ma sheegaan
88% suuqleyda ayaa adeegsada xogta ay heleen dhinacyada saddexaad si kor loogu qaado gaaritaankooda iyo fahamkooda macaamiishooda, halka 45% ganacsiyada ay u adeegsadaan inay ku kasbadaan macaamiil cusub Waxaa sidoo kale la ogaaday in shirkadaha shaqaaleeya shaqsiyaadka xogta kexeeya ay hagaajiyaan ROI-yada suuq geynta shan ilaa sideed jeer. Suuqleyda oo dhaafay ujeeddooyinka dakhligoodu waxay adeegsanayeen farsamooyin shaqsiyadeed shaqsiyadeed oo ku shaqeeya xog 83% waqtigaas.
Shaki la'aan, xogta suuqgeynta ayaa lagama maarmaan u ah kor u qaadista alaabada iyo adeegyada dadka saxda ah sanadka 2020 iyo wixii ka dambeeya.
Faa'iidooyinka Xogta Suuqgeynta
Aynu si qoto dheer u fahanno faa'iidooyinka suuqgeynta, taas oo xog ku saleysan.
Shakhsiyaadka Xeeladaha Suuqgeynta - Xogta suuqgeyntu waa barta bilowga ah ee u oggolaanaysa suuqleyda inay abuuraan istiraatiijiyad suuq-geyn ah oo la beegsanayo iyada oo loo marayo isgaarsiin shaqsiyeed. Xogta si taxaddar leh loo falanqeeyay, ganacsiyada ayaa sifiican loogu wargaliyay goorta la dirayo farriimaha suuq-geynta. Xaqiijinta waqtiga ayaa u oggolaaneysa shirkadaha inay ka soo saaraan jawaab dareen ah macaamiisha, taas oo dhiirrigelisa hawlgal wanaagsan.
53% suuqleyda ayaa sheeganaya in baahida loo qabo isgaarsiinta macaamiisha xudunta u ah ay badan tahay.
MediaMath, Dib-u-eegista Caalamiga ee Xog-Suuqgeynta iyo Xayeysiinta
Waxay kobcisaa Khibradaha Macaamiisha - Ganacsiyada macaamiisha siiya macluumaad run ahaantii waxtar u leh iyaga ayaa istaagi doona horyaal iyaga u gaar ah. Maxaad si xoogan ugu dhiirrigelinaysaa baabuur isboorti iibsade baabuur jira 75-sano? Suuqgeynta ololeyaasha ay horseedka ka yihiin suuqgeynta ayaa lagu bartilmaameedsanayaa baahida macaamiisha gaarka ah. Tani waxay kobcinaysaa khibrada macaamiisha. Suuqgeynta, inbadan, wali waa ciyaar martiqaad ah, xogta suuqgeyntu waxay u ogolaaneysaa ganacsiyada inay sameeyaan mala awaal tayo sare leh. Suuqgeynta ay hogaamineyso xogta waxay bixin kartaa macluumaad isdaba joog ah dhammaan war murtiyeedka macaamiisha. Waxay u oggolaaneysaa Omnichannel noocyo kala duwan in la abuuro halkaas oo haddii aad kula xiriirtid iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada, isdhexgalka shakhsi ahaaneed, ama taleefanka, macaamiisha waxay helayaan macluumaad isku mid ah oo khuseeya isla markaana maraya isla khibradaha suuqgeynta ee ku saabsan dhammaan kanaallada.
Waxay gacan ka geysaneysaa Aqoonsiga Jidadka Hawlgelinta ee Saxda ah - Suuqgeynta ku saleysan macluumaadka waxay shirkadaha u oggolaaneysaa inay aqoonsadaan kanaalada suuqgeynta u sameeya sida ugu fiican ee alaab ama adeeg la siiyay. Macaamiisha qaarkood, isgaarsiinta alaabta ee loo maro kanaalka warbaahinta bulshada ayaa kicin kara kaqeybgalka adeegsadaha iyo dhaqanka. Hagaha laga soo saaro Facebook-ga ayaa ka jawaabi kara si ka duwan raadadka laga soo saaray Shabakadda Muuqaalka Google (GDN). Xogta suuqgeynta ayaa sidoo kale u oggolaaneysa ganacsiyada inay go'aamiyaan nooca content ee sida ugu fiican ugu shaqeynaya kanaalka suuqgeynta la aqoonsan yahay, ha noqdo nuqul gaagaaban, faafaahin dheeri ah, qoraallada maqaalka, maqaallada, ama fiidiyowyada.
Waxay hagaajinaysaa Tayada Mawduuca - Xogta cusubi waxay kasii socotaa macaamiisha bartilmaameedka ah maalin kasta, suuqleyduna waa inay si taxaddar leh u falanqeeyaan. Xogta suuqgeyntu waxay ku wargalineysaa ganacsiyada inay sifiican u jaangooyaan ama wax uga beddelaan istaraatiijiyaddooda suuqgeynta horay u jirtay ee ku saleysan baahida weligood isbeddelaysa ee macaamiishooda. Sida Steve Jobs u yidhi, “Waa inaad kubilaabataa khibrada macmiilka oo aad dib ugu noqotaa tikniyoolajiyadda. Kuma bilaabi kartid farsamada oo waxaad isku dayi kartaa inaad ogaato halkaad ku iibinayso ”. Marka la fahmo baahiyaha firfircoon ee isticmaaleyaasha, sifiican, maahan oo kaliya shirkadaha inay macaamil cusub galaan laakiin sidoo kale waxay haysan doonaan kuwii hore. Tayada mawduucyada ayaa muhiim u ah helitaanka macaamiisha iyo sii-haynta macaamiisha labadaba.
Waa inaad kubilaawdaa khibrada macmiilka oo aad dib ugula noqotaa tikniyoolajiyadda. Kuma bilaabi kartid farsamada oo waxaad isku dayi kartaa inaad ogaato halka aad ku iibinayso.
Waxay kaa caawinaysaa inaad isha ku hayso tartanka - Xogta suuqgeyntu sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa u kuurgalida iyo falanqaynta istaraatijiyadaha suuq geynta tartame eeaga. Ganacsiyadu way ogaan karaan qaybaha xogta ee ay darseen tartamayaashu waxayna saadaalin karaan jihada ay u dooran doonaan inay suuq geynayaan wax soo saarkooda. Shirkad adeegsata xogta si ay u darsaan tartamayaasheeda ayaa dooran kara inay adeegsato istiraatiijiyad ka hortag ah oo u oggolaan doonta inay ka soo baxaan kaalinta koowaad. U adeegsiga xogta si loo barto tartameyaasha waxay sidoo kale u oggolaanaysaa ganacsiyada inay horumariyaan dhaqankooda suuqgeynta ee hadda jira iyo inaysan gelin khaladaad la mid ah kuwii ay galeen tartamayaashooda.
Aragtida u rog ficillada
Xogta suuqgeynta waxay bixisaa aragtiyo ficil ah. Si loo hagaajiyo ololayaasha suuqgeynta, waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato inta aad ka ogaan karto macaamiishaada. Jihaynta oo faahfaahsan ayaa fure u ah guusha sanadaha soo socda. Hirgelinta xalalka suuqgeynta xogta ay horseedka u tahay waxay gebi ahaanba beddeli kartaa habka aad ganacsi u leedahay. Si kasta oo ay u indha indheeyaan suuqyadu, iyagu ma samayn karaan mucjisooyin uun hunqaacooyinka. Waa in lagu xoojiyaa baryada duugista xogta suuq geynta natiijooyinka sare.
Tags: beel ganacsi2cilmi baaristayada contentkhibrada macmiilkakanaalka hawlgalkakanaalada suuqgeyntaxogta suuq geyntashakhsi ahaaneedbartilmaameedkadoorbidida isticmaalaha